आजकै दिन ६ वर्ष अगाडी गएको शक्तिशाली भूकम्पको त्यो भिडियो हेर्दा आज पनि मन आतिन्छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
आजकै दिन ६ वर्ष अगाडी गएको शक्तिशाली भूकम्पको त्यो भिडियो हेर्दा आज पनि मन आतिन्छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 25, 2021 AdminLeaveaComment on आजकै दिन ६ वर्ष अगाडी गएको शक्तिशाली भूकम्पको त्यो भिडियो हेर्दा आज पनि मन आतिन्छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
२०७२ वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पले भत्किएका करिब १० लाख घरमध्ये छ लाख ३८ हजार ५४० घर पुनःनिर्माण भएका छन् । छ वर्षअघिको भूकम्पले भत्किएर आठ लाख ११ हजार ७५४ घर धनीले पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा समावेश भएर सम्झौता गरेका छन् । हालसम्म आठ लाख १० हजार ६३५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रु ५० हजार बुझेका छन् । सात लाख चार हजार ४६७ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता वापत् रु एकलाख लिएका छन् ।
घर सम्पन्न गरेर छ लाख ३८ हजार ५४० लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रु एक लाख ५० हजार लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनःनिर्माणका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गोरखा भूकम्पको छैटौँ स्मृति दिवसका अवसरमा प्राधिकरणले आज राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनःनिर्माणका क्रममा छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासा आएकामा ती सबैको सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझेमा जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले सुनाउनुभयो । जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९०० घुम्ती डकर्मी र २५४ सामाजिक परिचालक परिचालनसहित विशेष अभियान अघि बढाएको छ ।
साझेदार संस्थालाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीको घर पुनःनिर्माण भइरहेको जनाइएको छ । भूकम्पपछि २९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ । १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सुनाउनुभयो ।
६ वर्षअघि आजकै दिन वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाई ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पले देशका १४ जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥यायो । वैशाख १२ गते र त्यसपछि लगातार गएको परकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए ।
काठमाडौँको धरहरा भत्कँदा धरहरा चढेका र पैदल हिँडेका ६० जनाको एकै ठाउँमा ज्यान गएको थियो । भूकम्पले लाखौ घरहरु भत्किए भने अरु लाखौमा आंशिक क्षति पुर्यो । आज कै दिन ७२ सालमा गएको भूकम्पको भिडियो हेर्दा आज पनि मन आत्तिन्छ । भिडियो हेर्नुहोस्ः